भाषण भयो भूकम्प पीडितको उद्दार भएन – TajaNepal
Home /Blog/भाषण भयो भूकम्प पीडितको उद्दार भएन
काठमाडौं÷देशमा दैवी विपत्ति आईपर्दा दाताले दिएको रकम समेत वितरण नगर्ने चरित्रका नेताको आफ्नो हैसियत देखाएको धेरै भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ को महाप्रलय (भूकम्प) बाट ७ लाखभन्दा बढी घर भत्किए । ती मध्ये सरकारको असहज नीतिका कारण यो ३ वर्षमा १ लाख ४१ हजार घर बनेका छन् । भूकम्प पीडितका ५ लाख ५७ हजार घर बन्न बाँकी छन् । चार हजार विद्यालय एक हजार एकसय संघ संस्थाका भवन बन्न बाँकी छन् । भूकम्प गएको ३ वर्ष पुग्दा भूकम्प पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको २८ महिना वितेको छ । पाँच वर्षको अवधि तोकेर स्थापना भएको प्राधिकरणमा कांग्रेसका डा. गोविन्द पोख्रेल र युवराज भुषाल सिइओ भए भने एमालेले इ. दीपक ज्ञवालीलाई जागिर खुवायो । भूकम्पका नाममा ६४ करोड झ्याप पार्ने भ्रष्ट सचिव अर्जुन कार्की प्राधिकरणमै छन् ।
प्राधिकरणको अवधि ३२ महिना बाँकी छ । चार लाख ३६ हजार घर बन्दै छन् दुई लाख घरको शुरुवात भएको छैन । राजधानीमै ७० हजार घर बन्नु छ । १८ हजार घर बस्न नहुने छन् त्यस्तो घरको संख्या २४ हजार ९९१ छन् । त्यसो त आठ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन् यी मध्ये ७ हजार ५५३ बनाउनु पर्छ । यो अवधिमा १७०० विद्यालय बनेको रेकर्ड प्राधिकरणको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र १९९७ रहेका छन् सरकारी कार्यालयहरु २३० छन् । भूकम्पले भयग्रस्त बनाएका काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरमा समेत राज्यको ध्यान नपुगेको बेला पूर्वको सोलु पश्चिमको वारपाकमा पीडितले कसरी राहत पाउन् !
भूकम्पले ७५३ सांस्कृतिक सम्पदा ध्वस्त छन् । तीमध्ये ४६० उपत्यका भित्रै छन् । अहिले ३ सय सम्पदा निर्माणको चरणाम छन् । सरकारले दाता सम्मेलन ग¥यो । दाताहरुले ४ खर्ब १० अर्व प्रतिवद्धता गरियो । तर अहिलेसम्म ३ खर्ब ४३ अर्वको प्रतिवद्धता आएको छ । रु. ६० अर्व हाराहारीमा रकम आएको अवस्था छ । दाताले प्रतिवद्धता जनाएको रकम समेत लिन नसक्ने नेतृत्व सरकारमा रहदाको फल हो यो । सरकारले पुर्ननिर्माणमा रु. ९ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसको ४५ प्रतिशत प्रतिवद्धता आएको हो । भूकम्पले क्षति पु¥याएका २८६ स्थानमा बस्ती सार्नु पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ ३ हजार ७९४ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
३२ जिल्लाका २४ हजार असाहाय रहेका छन् । बृद्धबृद्धा एकल महिला अनाथ बालबालिका र भूकम्पले अभिभावक गुमाएका र भूकम्पले असाहाय बनाएका गरी चार थरी पीडितको उद्दार कहिले हुन्छ ।